Abantu aba-4 babulawa kwingozi yenqwelomoya yaseCzech Republic naseFrance
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » Abantu aba-4 babulawa kwingozi yenqwelomoya yaseCzech Republic naseFrance
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeCzechia Breaking • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • iindaba • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Kwangolo suku lunye, inqwelo-moya yokukhanyisa yawela kuhola wendlela kumantla eFrance, eVoignarou, yabulala abantu ababini ababekhwele kuyo.
Inqwelomoya enenjini ekhanyayo iwile eCzech Republic namhlanje.
Abantu ababini ababekhwele kwinqwelomoya babhubha engozini.
Kwasweleka abantu ababini kwingozi yenqwelomoya eFrance
Abantu ababini babhubha kwingozi yenqwelo-moya enenjini yokukhanyisa kufutshane nedolophu yaseKladno ngasePrague Umphakathi waseCzech.
Ingozi ibikwe ngoMgqibelo, nge-4 kaSeptemba, ngummeli wamapolisa aseCzech uLucia Novotna.
"Abantu ababini babhubhe kwingozi yenqwelomoya yezemidlalo kufutshane nedolophu yaseKladno," latsho ipolisa.
Ingozi yenzeke emva nje kwe-14: 00 (2pm) kwiXesha laseYurophu.
Amapolisa aseCzech ngoku aphanda oonobangela besi sehlo.
Kwangolo suku lunye, inqwelomoya enenjini yokukhanyisa yangena kwindlela enkulu kumantla eFrance iVoignarou. Kwasweleka abantu ababini kuloo ngozi.